०७८ बैशाख ०९ गते बिहिबार यस्तो छ ! तपाईंको राशिफल:: Mero Desh
०७८ बैशाख ०९ गते बिहिबार यस्तो छ ! तपाईंको राशिफल
Published on: ९ बैशाख २०७८, बिहीबार ०२:०९
मेष (चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो, अ पारिवारिक भेटघाटको समय छ । टाढिएका आफन्तहरू नजिकिनेछन् । वि’शेष सभा समारोहमा भाग लिने मौका छ । मान स’म्मान पनि पाइनेछ । धार्मिक तथा सामाजिक काममा रुचि जाग्नेछ । साना व्यक्तिको सहयोगले ठूलो फाइदा उठाउन सकिनेछ । आश मारेको काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ ।
बृष (ई,ऊ,ए,ओ,वा,वी,वू,वे, वो) पढाइ लेखाइमा प्र ग ति हुनेछ । बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिनेछ । प्रे म र मित्रताको बन्धन कसिएर जाला, पढाइमा सुधार हुने दिन छ । सामान्य र उद्योग तथा व्यापारमा राम्रै ला भ मिल्ने देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा लगानी बढाउन सकिनेछ । विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् !हिम्मतले काम लिने समय छ ।
मिथुन (का,की,कू,घ,ङ,छ,के,को,हा) आत्मीयजनसँग भेट घाट होला । सरसफाइ, बाग बगैंचा सम्बन्धी काममा आ क र्षित होइएला स्वा दिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ । परिवा रजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ पितृधनको उपयोगबाट विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ । घरमा सुख समृद्धि बढ्नेछ बुद्धिको उपयोगले शत्रुबाट जोगिन सकिनेछ ।
कर्कट (ही,हू,हे,हो,डा,डी,डु,डे, डो) केही कामका अवसर फुत्कने सम्भावना देखिन्छ, सचेत रहनुहोला कृषि तथा पशु पालनमा त्यति लाभ नभए पनि व्यापारमा प्र’शस्त फाइदा हुने योग छ !आर्थि’क अभावले भने अलि सताउनेछ व्यव सायमा केही उतारचढाव आउला । प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिन सक्छ ! अस्थायी पेसाबाट मनग्य फाइदा हुने देखिन्छ ।
सिंह (मा,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे) मनन, ध्यान वा रचनामा रुचि बढ्नेछ घरमा बसेरै विभिन्न काम सम्पादन गर्न सकि नेछ चुनौतीहरू पन्साउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिनेछ धैर्यले काम लिने समय छ । बौद्धिक प्रभाव बढ्नुका साथै विभिन्न अवसर पाइने समय छ । कुटुम्बको सहयोग प्राप्त होला । नोकरी प्राप्त हुने सम्भावना छ ।
कन्या (टो,पा,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो) कृषि तथा पशु व्यवसाय बाट लाभ हुने समय छ । प्राकृ’तिक पर्यावरणमा रमाउने दिन छ । गरेका कामबाट प्र’शस्त ला भ हुनेछ । श्र’मको उचित मूल्यांकन होला । सन्तानबाट सुख मिल्ने योग छ । रोकिएका काम सुरु हुनेछन् । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउ ने मौका छ । मित्रता र प्रेमको बन्धन कसिन सक्छ ।
तुला (रा,री,रु,रे,रो,ता,ती,तू,ते)लामो यात्राको प्र’क्रिया अघि बढ्नेछ । प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ !टाढाको यात्रा गर्ने प्र’क्रिया अघि बढ्न सक्छ । साथै, धनजनको आर्जन होला । आम्दानीका विभिन्न माध्यम फेला पर्नेछन् । यात्रा को योग छ । पठन पाठनमा प्रगति हुनेछ । प्रतिभा प्र’दर्शन गरेर धेरैलाई अचम्मित तल्याउन सकिनेछ
बृश्चिक (तो,ना,नी,नू,ने,नो,या, यी, यू) सहयोगीहरूले हात झिक्नाले केही समस्या थपिने देखिन्छ । धन तत्काल खर्च गर्नुपर्ला छर छिमेकमा केही असमझदारी बढ्ने योग देखि ए पनि समाधान भने हुनेछ ! धेरै प’रिश्रमबाट थोरै लाभ मिल्ने योग छ । घर खर्च पनि बढ्नेछ! तपाईंको विचारलाई धेरैले मन पराउनेछन् नाता गाँस्नेहरूले केही दुःख दिनेछन् ।
धनु(ये,यो,भा,भी,भू,ध,फा,ढा,भे) समझदारी बढ्न सक्छ । कृषि तथा पशुपालनमा खर्च बढ्नेछ । आयआर्जन बढ्ने र उठ्नुपर्ने रकम हात लागी हुने समय छ । पेटको समस्याले सताउन सक्छ, सचेत रहनुपर्नेछ । रोकिएका काममा दोहो र्याएर प्रयास गर्दा फाइदा हुनेछ । धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सकिनेछ । लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ ।
मकर (भो,जा,जी,जू,जे,जो,ख,खी,खू,खे,खो, गा, गी) दीर्घ कालीन रूपमा फाइदा हुने काममा हात हाल्ने समय छ । तार्किक क्षमता बढ्नेछ । नयाँ शिप तथा ज्ञान प्राप्त हुने योग छ । पढाइमा प्रगति हुनेछ । धर्म कर्म र समाजसेवामा विशेष लगाव बढ्नेछ । कृषि र पशुपालनबाट फाइदा होला । रोकिएका काम बन्नुका साथै बिस्तारै नयाँ काम सुरु हुने छन् ।
कुम्भ (गू,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,दा) अवसरले पछ्याउनेछन् भने बोलीको प्रभाव पनि बढ्नेछ धन लाभ होला !वैदेशिक क्षेत्रबाट लाभ उठाउने मौका छ । चिताएको काम बन्ने देखिन्छ । आफन्तजनको सहयोगले विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ । नयाँ काम बन्नेछ । रमाइला ठाउँको भ्रमण गर्ने मौका जुर्न सक्छ । अवसरको खोजीमा दौडधुप गर्नुपर्ला ।